अनुष्कालाई यसरी रुवाएका थिए शाहरुखले ? « Deshko News
अनुष्कालाई यसरी रुवाएका थिए शाहरुखले ?
अहिले आफूलाई खानकै साथ जरुरी नरहेको बताउने बलिउड नायिका अनुष्का शर्माले शाहरुख खान अभिनित चलचित्र ‘रब ने बना दी जोडी’बाट करिअर सुरु गरेकी थिइन् । अहिले उनी आफूलाई प्रभावशाली नायिकाको सूचीमा दरिन खानकै साथ जरुरी नभएको बताउँछिन् ।
आलिया भट्टको उदाहरण दिँदै उनी भन्छिन्, ‘आलिया खानको फिल्मबाट आएकी होइनन्, तर पनि राम्रैसंग अगाडि बढिरहेकी छन् ।’ त्यस्तै, खानकै फिल्मबाट डेब्यु गरेका तर अभिनयमा टिक्न नसकेकाहरूको पनि उदाहरण दिइन् उनले । यति हुँदाहुँदै पनि शाहरुखबाट निकै प्रभावित छिन् अनुष्का ।
उनको भनाइअनुसार शाहरुखसँग कुनै स्वार्थ छैन । पछिल्लो समय धेरै कलाकार आफ्नो चरित्रमा केन्द्रित भएको पाएकी अनुष्कालाई लाग्छ, साहरूख यस मामिलामा उदार छन् ।